Exodus 16 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Otetela Pangasinan Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Thai Tigrinya Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
16 Akyiri yi wotu fii Elim,+ na Israel asafo no nyinaa baa Sin+ sare a ɛda Elim ne Sinai ntam no so. Ɛno yɛ bere a wofii Egypt no akyi ɔsram a ɛto so abien no da a ɛto so dunum. 2 Afei Israel asafo no nyinaa fii ase nwiinwii hyɛɛ Mose ne Aaron wɔ sare no so.+ 3 Na Israelfo no kae sɛ: “Sɛ Yehowa kunkum+ yɛn wɔ Egypt asase so bere a yɛredidi na yɛte kwansɛn ho rewe nam+ mpo a, anka eye sen sɛ mode yɛn aba sare yi so sɛ ɔkɔm mmekunkum asafo mũ yi nyinaa.”+ 4 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Mɛma aduan atɔ afi soro ama mo,+ na obiara mfi adi nkɔfa nea ɛbɛso no da koro,+ na mede bɛsɔ wɔn ahwɛ sɛ wobedi me mmara so anaa wɔrenni so.+ 5 Na da a ɛto so asia+ no wɔmfa nea wɔfa daa no mmɔho abien+ na wonsiesie.” 6 Enti Mose ne Aaron ka kyerɛɛ Israelfo no nyinaa sɛ: “Anwummere mubehu sɛ Yehowa na oyii mo fii Egypt asase so.+ 7 Na anɔpa mubehu Yehowa anuonyam,+ efisɛ Yehowa ate anwiinwii a munwiinwii hyɛ no no. Na yɛn de, yɛne hena a munwiinwii hyɛ yɛn?” 8 Mose toaa so sɛ: “Anwummere Yehowa bɛma mo nam awe na anɔpa nso wama mo aduan adi amee, efisɛ Yehowa ate anwiinwii a munwiinwii hyɛ no no. Yɛn de yɛyɛ dɛn? Yehowa na munwiinwii hyɛ no na ɛnyɛ yɛn.”+ 9 Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ: “Ka kyerɛ Israel asafo no sɛ, ‘Mommra Yehowa anim, efisɛ wate mo anwiinwii no.’”+ 10 Bere a Aaron kasa kyerɛɛ Israel asafo no nyinaa wiei no, wɔdan wɔn ani kyerɛɛ sare no so, na Yehowa anuonyam puei wɔ omununkum no mu.+ 11 Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 12 “Mate Israelfo anwiinwii no,+ na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Anwummere mobɛwe nam na anɔpa moadi aduan amee,+ na mubehu sɛ mene Yehowa mo Nyankopɔn.’”+ 13 Eduu anwummere no nkokɔhwerew+ bae bɛkataa nsraban no so, na anɔpa no obosu bɛkataa nsraban+ no ho nyinaa hyiae. 14 Akyiri yi obosu no kɔe; afei na ade nketenkete+ bi gugu sare no so te sɛ asukɔtweaa.+ 15 Bere a Israelfo no hui no, wobisabisaa wɔn ho sɛ: “Dɛn ni?” Ná wonnim ade ko. Enti Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛyɛ aduan a Yehowa de ama mo sɛ munni.+ 16 Ahyɛde a Yehowa de ama ne sɛ, ‘Obiara mfa nea obetumi adi. Monhwɛ akra a wɔwɔ mo ntamadan mu na munhu dodow a mobɛfa, obiara omer+ biako.’” 17 Israelfo no yɛɛ saa; ebinom faa pii na ebinom nso faa kakraa bi. 18 Sɛ wɔde omer susuw a, nea ɔfaa pii no annya ammoro so, na nea ɔfaa kakraa bi no de antɔ sin.+ Obiara faa nea obetumi adi. 19 Afei Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Obiara nnnyaw bi mmma ade nnkye so.”+ 20 Nanso wɔantie Mose. Ebinom gyaw bi ma ade kyee so, na ɛdɔɔ mmoawa ma ɛbɔnee,+ enti Mose bo fuw wɔn.+ 21 Anɔpa+ biara obiara kɔfa nea obetumi adi. Na sɛ owia ano yɛ den a, na anan. 22 Na da a ɛto so asia no wɔfaa aduan no mmɔho abien,+ obiara de omer abien. Enti Israel mpanyimfo nyinaa bɛbɔɔ Mose amanneɛ. 23 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, “Nea Yehowa aka ni: Ɔkyena yɛ homeda, homeda kronkron ma Yehowa.+ Nea mobɛtõ no montõ, nea mobɛnoa nso monnoa.+ Na nea ɛbɛka no momfa nsie nkosi anɔpa.” 24 Enti wɔde siei kosii anɔpa, sɛnea Mose ka kyerɛɛ wɔn no; na ammɔn na annɔ mmoawa nso.+ 25 Ɛnna Mose kae sɛ: “Munni no nnɛ, efisɛ nnɛ yɛ homeda+ ma Yehowa. Ɛnnɛ de, morennya bi wɔ sare no so. 26 Momfa no nnansia, na da a ɛto so ason no de, ebi rentɔ, efisɛ ɛyɛ homeda.”+ 27 Na ɛbae sɛ da a ɛto so ason no ebinom kɔe sɛ wɔrekɔfa bi, nanso wɔannya bi. 28 Ɛnna Yehowa bisaa Mose sɛ: “Mubebu m’ahyɛde ne me mmara so akosi da bɛn?+ 29 Monhyɛ no nsow sɛ Yehowa ama mo homeda.+ Ɛno nti na da a ɛto so asia no wama mo nnanu aduan no. Enti da a ɛto so ason no, obiara ntena ne fie,+ obiara mmfi adi.” 30 Enti ɔman no homee da a ɛto so ason+ no. 31 Ná Israelfo no frɛ aduan no “mana.” Ɛte sɛ aba fitaa bi, na ne dɛ te sɛ tetare a ɛwo wom.+ 32 Afei Mose kae sɛ: “Yehowa ahyɛ sɛ, ‘Monhyɛ omer mã na monkora so mo awo ntoatoaso+ nyinaa mu, na wɔahu aduan a mema mudii wɔ sare so bere a miyii mo fii Egypt asase so no.’”+ 33 Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ: “Fa kuruwa na hyɛ mana omer biako gu mu na fa si Yehowa anim, na monkora so mo awo ntoatoaso nyinaa mu.”+ 34 Sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no, Aaron de kosii Adanse*+ no anim koraa so. 35 Enti Israelfo no dii mana mfe aduanan+ kosii sɛ woduu asase a nnipa te so so.+ Mana na wodi kosii sɛ woduu Kanaan hye so.+ 36 Na omer yɛ efa susude nkyem du mu biako.
Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ adaka a wɔkora kyerɛwtohɔ titiriw so wom.